Rayson | umatilasi oshibhile nebhokisi lebhokisi
ERayson, ukuphuculwa kwezobuchwepheshe kanye nokwenza izinto ezintsha kuyizinzuzo zethu ezibalulekile. Selokhu kwasungulwa, besilokhu sigxile ekuthuthukiseni imikhiqizo emisha, ngcono ikhwalithi yomkhiqizo, kanye nokusebenzela amakhasimende. Umatilasi oshibhile kanye nebhokisi lentwasahlobo sinabasebenzi abaqeqeshiwe abaneminyaka yesipiliyoni embonini. Yikho enikeza izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kumakhasimende emhlabeni wonke. Uma unemibuzo mayelana nomkhiqizo wethu omusha umatilasi oshibhile kanye nentwasahlobo yebhokisi noma ufuna ukwazi okwengeziwe ngenkampani yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi. Ochwepheshe bethu bangathanda ukukusiza nganoma yisiphi isikhathi.Uma abantu babhekisise ngaphakathi, bazothola kuphela ama-Straight, aqede ngobunono, abaqinisekisa ukuthi kufanele bagqoke isikhathi eside.